एड्स के हो ? के होइन ? – Wire Nepal
– एचआइभी संक्रमित हुनुको अर्थ एड्स होइन
– सुतेका वेला पसिना आउनु एड्सको आमलक्षण हो
– एचआइभी संक्रमण हुन्छ, एड्स होइन
– एड्स स्वयम्मा रोग होइन
– एड्सबाट बच्ने प्रमुख उपाय भनेको रोगबारे सही जानकारी र सुरक्षित उपायको अवलम्बन नै हो
एड्स स्वयम्मा रोग होइन । तर, एड्सपीडित व्यक्तिको शरीरले जीवाणु, विषाणुलगायतका कारण लाग्ने संक्रामक रोगविरुद्ध लड्ने आफ्नो प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक शक्ति गुमाउँछ । यस्तो किन हुन्छ भने– एड्स गराउने एचआइभी भाइरसले रगतमा हुने प्रतिरोधी पदार्थ श्वेतरक्तकोष (लिम्फोेसाइट)लाई आक्रमण गर्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एड्स प्राणघातक अवस्था हो । तसर्थ, एड्सबारे केही महत्वपूर्ण तथ्य जानिराखौँ ः
लक्षणबारे जानौँ र समयमै परीक्षण गराऔँ
एड्सपीडितको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने हुँदा सामान्य चिसोजन्य रोगदेखि क्षयरोगसम्मका संक्रामक रोगहरूले सजिलै आक्रमण गर्दछन् र तिनको उपचार निकै कठिन भएर आउँछ । सुरुवाती स्टेजमा एड्सको पहिचान कठिन हुन्छ, जसका कारण उपचारमा ढिलाइ हुन जान्छ । त्यसैले एड्सका सुरुवाती लक्षणबारे जानकारी हुनु जरुरी छ ।
यसका प्रमुख लक्षण–
– सुतेका वेला पसिना आउनु ।
– हप्तौँसम्म लगातार ज्वरो आइरहनु ।
– हप्तौँसम्म खोकी लागिरहनु ।
– वजन घट्नु ।
– मुखमा घाउ आउनु ।
– बारम्बार डायरिया हुनु ।
– घाँटी सुन्निनु ।
– छालामा दुखाइसहितको चिलाउने बिबिरा आउनु ।
संक्रमणका तरिका जानेर सधैँ सजग रहौँ
एचआइभी संक्रमण मुख्यतया यी कारणले हुन्छन्–
– असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट सर्छ ।
– संक्रमित रगत प्रयोग गरेमा सर्छ ।
– संक्रमित सुई प्रयोग गरेमा सर्छ ।
– एचआइभी संक्रमित महिलाले बच्चा जन्माएमा बच्चामा सर्छ । संक्रमितले स्तनपान गराउँदा पनि साना बच्चामा सर्ने सम्भावना रहन्छ ।
एचआइभी संक्रमित हुनुको अर्थ एड्स होइन भन्ने बुझौँ
कुनै व्यक्ति एचआइभी संक्रमित छ भने यो जरुरी छैन कि उसमा एड्स होस् । एचआइभी संक्रमित अधिकांश व्यक्ति सही औषधोपचार विधि अवलम्बन गरी सामान्य जिन्दगी जिउन सक्छन् । यसको मतलब यो भन्न खोजिएको होइन कि, एचआइभी संक्रमितलाई एड्स हुँदैन । एचआइभी संक्रमित व्यक्तिलाई एड्स हुन सक्छ, तर हरेक एचआइभी संक्रमित व्यक्तिलाई एड्स हुन्छ भन्ने छैन ।
अहिलेको अवस्थामा विकसित उपचार विधि अवलम्बन गर्ने एचआइभी संक्रमितमा जीवनकालभर एड्सको अवस्था विकास हुन पाउँदैन । एचआइभीको तेस्रो स्टेजका रूपमा पनि चिनिने एड्सको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने नभई एचअइभी भाइरसको संक्रमण हुने हो । धेरैले एड्स सर्ने कुरा गरेको सुनिन्छ, तर संक्रण हुने भनेको एचआइभी भाइरसको हो । असुरक्षित यौन सम्बन्ध, संक्रमित रगत वा इन्जेक्सनमार्फत एचआइभीको संक्रमण हुन्छ, एड्सको होइन ।
रोकथामका उपाय अपनाऔँ
एड्स असाध्य अवस्था हो । तसर्थ, यसबाट बच्नुको विकल्प छैन । यसबाट बच्न असुरक्षित यौनसम्बन्धबाट बच्नुपर्छ । पुरानो तथा संक्रमित सुईको प्रयोग गर्नुहुँदैन । संक्रमित रगतको प्रयोग गर्नुहुँदैन । एचआइभी तथा एड्सबाट बच्ने प्रमुख उपाय भनेको रोगबारे सही जानकारी र सुरक्षित उपायको अवलम्बन नै हो ।
PREVIOUS POST Previous post: ग्याष्ट्रिक पीडित हुनुहुन्छ ? मुटुरोग पनि हुन सक्छ
NEXT POST Next post: हर्टयाट्याकको जोखिम पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी किन हुन्छ ?